SomaliTalk.com » Warbixin: Sugnaanta Cuntada iyo Nafaqada: Saameyntii Xilliga Jiilaalka
Hay’adda Falaqeynta Sugnaanta Cuntada iyo Nafaqada (FSNAU) waxay hadda soo saartay warbixin Saddex biloodle ah oo ku saabsan Sugnaanta Cuntada iyo Nafaqada: Saameyntii Xilliga Jiilaalka. Warbixintan goobani waxay i noo iftiiminaysaa xaaladda Cimilada, Colaadda Sokeeye, Beeraha, Xoolaha, Suugyada iyo Nafaqada iyo waliba Falaqeynta Baahsan Sugnaanta Cunnada ee Magaalooyinka iyo reer miyiga.
Tiro dhan 2.51 malyuun oo qof ayaa ku sugan cunta xumi Soomaaliya. Hayeeshee, tirade dadka ku sugan Gargaar Deg-deg ah (IPC Phase 4) ayaa hoos u dhacday taas oo loo aaneynayo hagaaga xaaladda sugnaanta cuntada ee hab-nololeedka jiinka webiga ee gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Wax-soo-saar badar/firiley oo wanaagsan ayaa laga goostay diilka/jiinka webiga Jubooyinka bilaha 3aad – 4aad 2012, taasi oo kobcinaysa fursadda iyo keydka badarka ah ee ay haystaan qoysaska saboolka/danyarta ah illaa laga kaadhayo bilaha6aad-7aad 2012.
Hawlo beereed khudaar iyo geed midhood ayaa ka socda hab-nololeedka jiinka/diilka webiga gobolka Gedo, taas oo ka yeeshay awoodda wax-siweydaarsiga badarka iyo maalin goosiga (bishii 3aad 2012) ka ugu sareeya dalka.
Qiimaha badarka/firileyda ayaa hoos u dhacayay saddexdii bilood ee ugu horeeyay ee sanadkan; qiimaha badarka ee suuqyada koonfurta ayaa boqolkiiba 50-60 ka hooseeya sannad ka hor inta uu ahaa (bishii 3aad 2011)
Xaaladda daaqa iyo biyuhu way fiican yihiin dalka, inkastoo ay ku liitaan qaybo ka mid ah Waqooyi-bari, meelahaasi oo roobabkii Deyrtu 2011/12 liiteen.
Wakhtigii caadiga ahaa ay roobabkii Gu’gu uga bilowdeen koonfurta Soomaaliya, halka roobab khafiif ama dhexdhexaad oo teel-teela ahi laga soo sheegay inay ka da’een deegaanno balaadhan oo ka tirsan gobolada Dhexe iyo Waqooyi.
Xaaladda nafaqo ee koonfurta Soomaaliya waa mid Halis ah ama Ba’an, inkastoo hagaag wax-ku-ool ah la wariyey laga soo bilaabo bilihii 7aad iyo 8aad 2011.
Qoraalkan waxa aad ka soo miguursan kartaa shabakadan hoos ku xusan:
Haddii aad wax su’aalo ah hayso, fadlan lagala soo xidhiidh: info@fsnau.org http://fsnau.org/